ခင်​ဗျားတို့ ဒီရဲ​မေ​လေးကို ဂုဏ်​ပြုတဲ့အ​နေနဲ့ ဒီပို့ကို ကျော်မသွားကြနဲ့နော်.. - Real Gaming Myanmar
ခင်​ဗျားတို့ ဒီရဲ​မေ​လေးကို ဂုဏ်​ပြုတဲ့အ​နေနဲ့ ဒီပို့ကို ကျော်မသွားကြနဲ့နော်..
ခင်​ဗျားတို့ဒီရဲ​မေ​လေးကိုဂုဏ်​ပြုတဲ့အ​နေနဲ့ ဆုံး​အောင်​​တော့ဖတ်​​စေချင်​သလို ….
​ဟျောင့်​​မေမြို့သူ့ကိုမျက်​ကွယ်​မပြုဘဲ ….. အသိအမှတ်​ပြု….ဂုဏ်​ပြု​စေချင်​တယ်​ …..
ေ​ဟျာင့်​​မေမြို့ ခင်​ဗျားဂုဏ်​ယူလိုက်​…… ဟျောင်​..မြို့မရဲစခန်းသူ့​ကြောင့်​ လက်​မ​ထောင်​လိုက်​​တော့သူ့နံမည်​….ဒုရဲအုပ်​ ​အေးစပယ်​ ရွာထိပ်​မုတ်​ဦးမှာ လုံခြုံ​ရေး တာဝန်​ယူထားတယ်​..
မ​နေ့က အကြတ်​​နေ့​နေ့လည်​…ကျုပ်​မုဒ်​ဦးနားသွာပြီး သီချင်းနား​ထောင်​​နေတုန်း ရုတ်​ရုတ်​သဲနဲ့ လှမ်းကြည့်​​တော့ မူး​နေတဲ့ချာတိတ်​​တွေနဲ့ အားကြိုးမာန်​တက်လမ်းရှင်း​နေတဲ့ ​ထောင်​​ထောင်​​မောင်း​မောင်းရဲ​မေရဲအုပ်​ တ​ယောက်​ထဲ နဲ့ပြသနာတက်​​ရော သူ့ကိုဆဲပြီးထိုးတဲ့ အုပ်​စုထဲက တ​ယောက်​ကို ရင်​ဘတ်​အမိဆွဲပြီးသူတချက်​ ကိုယ်​တချက်​ ထိုး​နေတာမိုက်​တယ်​..ပါးစပ်​ကသတ္တိရှိလို့ တ​ယောက်​ခြင်းထိုး​​နေတာ မင်းတို့ဘယ်​သူမှမဝင်​နဲ့တဲ့အံ့​ရောဗျာ…
ဘေးကအ​ဖေါ် ​တွေကလည်းမူးသာမူးတာ စည်းကမ်းရှိပါ့သူလူကိုဘဲအတင်းဆွဲလု​နေတာ ရဲ​မေကလည်းမလွှတ်​ဘူး ..ဒါနဲ့ကျုပ်​လည်းလုံခြုံ​ရေးရဲမှူးကိုသတင်းသွား​ပေးလိုက်​တယ်​ ဟို​ကောင့်​လှမ်းကြည့်​​တော့ နဲနဲကွဲသွားတယ်​ လက်​သီးပြင်းချက ​ဟို​ကောင်​က၂ဖက်​နဲ့ ထိုးတာရဲ​မေကတဖက်​ထဲအံ့​ရော..ဒီ​နေ့အခု​လေးတင်​မုဒ်​ဦး​ရှေ့က​လေးကို တိုက်​ပြီး​ပြေးတဲ့ဆိုင်​ကယ်​လိုက်​ဖမ်း ပါးစပ်​ကလည်​ စက်နဲ့​ပေါက်​ပြီး​ရှေ့လမ်းဆုံလှမ်း​ပြော​ပြေးလိုက်​တာ ​ယောကျာင်္းရင့့်မကြီး ရဲအုပ်​​တွေ​တောင်လိုက်​မမှီဘူး ကျုပ်​လည်း​နောက်​က လိုက်​တာဘဲ.ကျမ္မာ​ရေးမ​ကောင်း​တော့ မမှီဘူးဓာတ်​တိုင်​ ၄တိုင်​​လောက်​ပြတ်​ကျန်​ခဲ့တယ်​။
ဆိုင်​ကယ်​နဲ့တိုက်​​ပြေးတဲ့​ကောင်​မိတယ်​ဗျ​ လေးစားတာထက် ​ပိုအံ့ဩမိတယ်​..ကျုပ်​တသက်​ အမျိုးသ္မီးရဲ​မေ တ​ယောက်​ရဲ့စွမ်း​ဆောင်​ရည်​မမြင်​ဘူးဘူး..ရုပ်​ရှင်​မဟုတ်​ဘူး​နော်​ ……… ကျုပ်​မျက်​မြင်​လက်​​တွေ့…ဘာပဲ​ပြော​ပြောဗျာမုဒ်​ဦးမှာ တာဝန်​ယူထားတဲ့ လုံခြုံ​ရေး​တွေကို​ တာဝန်​ယူ​ကျွေးရ​ မွေးရတာပီတိဖြစ်​မိတယ်​….ဂုဏ်​ယူပါတယ်​သ္မီးပြည်​သူ​တွေအတွက်​အားဖြစ်​ပါ​စေလို့​ လေးစားတဲ့ ​ဒေါ်​ထွေးခင်​က ကျုပ်..
Credit – Davy Aba
ခငျ​ဗြားတို့ဒီရဲ​မေ​လေးကိုဂုဏျ​ပွုတဲ့အ​နနေဲ့ ဆုံး​အောငျ​​တော့ဖတျ​​စခေငျြ​သလို ….
​ဟြောငျ့​​မမွေို့သူ့ကိုမကျြ​ကှယျ​မပွုဘဲ ….. အသိအမှတျ​ပွု….ဂုဏျ​ပွု​စခေငျြ​တယျ​ …..
ေ​ဟြာငျ့​​မမွေို့ ခငျ​ဗြားဂုဏျ​ယူလိုကျ​…… ဟြောငျ​..မွို့မရဲစခနျးသူ့​ကွောငျ့​ လကျ​မ​ထောငျ​လိုကျ​​တော့သူ့နံမညျ​….ဒုရဲအုပျ​ ​အေးစပယျ​ ရှာထိပျ​မုတျ​ဦးမှာ လုံခွုံ​ရေး တာဝနျ​ယူထားတယျ​..
မ​နကေ့ အကွတျ​​နေ့​နလေ့ညျ​…ကြုပျ​မုဒျ​ဦးနားသှာပွီး သီခငျြးနား​ထောငျ​​နတေုနျး ရုတျ​ရုတျ​သဲနဲ့ လှမျးကွညျ့​​တော့ မူး​နတေဲ့ခြာတိတျ​​တှနေဲ့ အားကွိုးမာနျ​တကျလမျးရှငျး​နတေဲ့ ​ထောငျ​​ထောငျ​​မောငျး​မောငျးရဲ​မရေဲအုပျ​ တ​ယောကျ​ထဲ နဲ့ပွသနာတကျ​​ရော သူ့ကိုဆဲပွီးထိုးတဲ့ အုပျ​စုထဲက တ​ယောကျ​ကို ရငျ​ဘတျ​အမိဆှဲပွီးသူတခကျြ​ ကိုယျ​တခကျြ​ ထိုး​နတောမိုကျ​တယျ​..ပါးစပျ​ကသတ်တိရှိလို့ တ​ယောကျ​ခွငျးထိုး​​နတော မငျးတို့ဘယျ​သူမှမဝငျ​နဲ့တဲ့အံ့​ရောဗြာ…
ဘေးကအ​ဖျေါ ​တှကေလညျးမူးသာမူးတာ စညျးကမျးရှိပါ့သူလူကိုဘဲအတငျးဆှဲလု​နတော ရဲ​မကေလညျးမလှတျ​ဘူး ..ဒါနဲ့ကြုပျ​လညျးလုံခွုံ​ရေးရဲမှူးကိုသတငျးသှား​ပေးလိုကျ​တယျ​ ဟို​ကောငျ့​လှမျးကွညျ့​​တော့ နဲနဲကှဲသှားတယျ​ လကျ​သီးပွငျးခကြ ​ဟို​ကောငျ​က၂ဖကျ​နဲ့ ထိုးတာရဲ​မကေတဖကျ​ထဲအံ့​ရော..ဒီ​နအေ့ခု​လေးတငျ​မုဒျ​ဦး​ရှကေ့​လေးကို တိုကျ​ပွီး​ပွေးတဲ့ဆိုငျ​ကယျ​လိုကျ​ဖမျး ပါးစပျ​ကလညျ​ စကျနဲ့​ပေါကျ​ပွီး​ရှလေ့မျးဆုံလှမျး​ပွော​ပွေးလိုကျ​တာ ​ယောကြာင်ျးရငျ့့မကွီး ရဲအုပျ​​တှေ​တောငျလိုကျ​မမှီဘူး ကြုပျ​လညျး​နောကျ​က လိုကျ​တာဘဲ.ကမ်ြမာ​ရေးမ​ကောငျး​တော့ မမှီဘူးဓာတျ​တိုငျ​ ၄တိုငျ​​လောကျ​ပွတျ​ကနျြ​ခဲ့တယျ​။
ဆိုငျ​ကယျ​နဲ့တိုကျ​​ပွေးတဲ့​ကောငျ​မိတယျ​ဗြ​ လေးစားတာထကျ ​ပိုအံ့ဩမိတယျ​..ကြုပျ​တသကျ​ အမြိုးသ်မီးရဲ​မေ တ​ယောကျ​ရဲ့စှမျး​ဆောငျ​ရညျ​မမွငျ​ဘူးဘူး..ရုပျ​ရှငျ​မဟုတျ​ဘူး​နျော​ ……… ကြုပျ​မကျြ​မွငျ​လကျ​​တှေ့…ဘာပဲ​ပွော​ပွောဗြာမုဒျ​ဦးမှာ တာဝနျ​ယူထားတဲ့ လုံခွုံ​ရေး​တှကေို​ တာဝနျ​ယူ​ကြှေးရ​ မှေးရတာပီတိဖွဈ​မိတယျ​….ဂုဏျ​ယူပါတယျ​သ်မီးပွညျ​သူ​တှအေတှကျ​အားဖွဈ​ပါ​စလေို့​ လေးစားတဲ့ ​ဒျေါ​ထှေးခငျ​က ကြုပျ..
Previous: တနင်္လာသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း..
Next: YBS မှစပယ်ယာနှင့်ကားသမားနှစ်ယောက်မှ မှတ်တိုင်မှလူငယ်တစ်ဦးကို မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ထိုးကြိတ် ( ရုပ်သံ )